Yen Tumbles, Australian, New Zealand Dollars Rally On Upbeat China Data | Myanmar Business Today
Home Business International Yen Tumbles, Australian, New Zealand Dollars Rally On Upbeat China Data
The Japanese yen fell toasix-month low and the Australian and New Zealand dollars rallied after an unexpected rebound in Chinese manufacturing activity raised hopes ofabrighter outlook for the world economy.
The euro was steady ahead ofatestimony to the European parliament by the European Central Bank’s new president, Christine Lagarde. A tightening British election race knocked the pound lower.
The latest data out of China, the world’s second biggest economy, set the tone for currency markets. Chinese factory activity expanded at the quickest pace in almost three years in November,aprivate business survey showed, following upbeat official data over the weekend.
Elsewhere, sterling was downafifth ofapercentage point at $1.2919 as polls pointed toanarrowing lead for the governing Conservative Party before the UK’s December 12 election.
ဂျပန်ယန်းငွေ ဈေးမှာ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် ခြောက်လအတွင်း အနိမ့်ဆုံး နှုန်းသို့ ကျသွားခဲ့သည်။ သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်ဒေါ်လာများမှာ တရုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ မျှော်လင့်မထားဘဲ တိုးတက်လာခဲ့သဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် မျှော်လင့်ချက်များ တိုးတက်လာစေ‌ခဲ့သောကြောင့် ပြန်တက်လာခဲ့သည်။
ယူ‌ရိုငွေဈေးမှာ European Central Bank ၏ ဥက္ကဋ္ဌသစ်ဖြစ်သူ Christine Legarde က ဥရောပသမဂ္ဂလွှတ်တော်၌ ထွက်ဆိုမည့်အချိန်မတိုင်မီတွင် ဈေးငြိမ်နေသည်။ ပြင်းထန်လာသော ဗြိတိန်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ပေါင်ငွေဈေးအနည်းငယ်ကျသွားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေးအင်အား ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံမှ အချက်အလက်များက ငွေကြေးဈေးကွက်များ၏ အ‌လှုပ်အခတ်အပြောင်းအလဲကို ဖန်တီးပေးနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်စက်ရုံများ၏ လည်ပတ်မှုသည် သုံးနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ပုဂ္ဂလိကဘက်မှ ပြုလုပ်သော ‌စီးပွားရေး စစ်တမ်းတစ်ရပ်အရသိရသည်။
အဆိုပါ စစ်တမ်းအရ အမှာစာအသစ်များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ ထုတ်လုပ်မှုများမှား အနေအထားအလားအလာ ကောင်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။
“တရုတ် PMI အညွှန်းကိန်းသာမက တခြား နောက်ကွယ်က ကိန်းဂဏန်းတွေ အလားအလာကောင်းနေတာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ တွေ့နေရတဲ့ ခန့်မှန်းကိန်စဂဏန်းတွေရဲ့ အနေအထားကို သက်ရောက်စေပါတယ်” ဟု G10 FX strategy မှ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Jeremy Stretch က ပြောသည်။
ယန်းဈေးမှာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀၉ ဒသမ ၇၃ ယန်းသို့ ကျသွားသည်။ ဤဈေးနှုန်းမှာ မေလမှစကာ အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်းကျဆင်းနိုင်သည့် ငွေကြေးဈေးနှုန်းများမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိန်းဂဏန်များကြောင့် ပြန်လည် ဦးမော့လာခဲ့သည်။ သြစတြေးလျ တစ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၆၇၇၉ ရှိနေသည်။
နယူးဇီလန်ဒေါ်လာကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၆၄၆၀ ဒေါ်လာ နှုန်းရှိနေသည်။ နောက်ထပ် စောင့်ကြည့်ရမည့် ကိန်းဂဏန်းမှာ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။
ယူရိုငွေဈေးကတော့ တစ်ယူရိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၁၀၁၇ ဒေါ်လာနှုန်းရှိနေသည်။
Previous articleJapan Plans to Spend $120 Billion to Stimulate Economy
Next articleHuawei Hits Back at FCC With Legal Challenge